Dulmiga Gaadiidleyda somaliland halaga daayo^^^^^ | Berberatoday.com
Dulmiga Gaadiidleyda somaliland halaga daayo^^^^^
September 15, 2021 - Written by berberatoday berberatoday
Bismilaahi raxamaan raxiim , waxaan salamayaa dhaman umada somaliga ku hadasha gaar ahaan umada somaliland , bacda salaan waxaan fariin iyo dhaliil is xambaarsan udiryaa gudoomiyaha caymiska somaliland , saleeban bukhaari. saleebaan waa nin aan ku tuhmayay waxgarad iyo diin oo aad magaciisaba ka dheehan karto, waxaan aad ula yaabay shirarka shirkadaha caymisku wadeen ee bilihii udanbeeyay ay la yeelanayeen gudoomiyaha iyo gudidiisa , lakin waxaney meeshaba soo dhigan oo aaney is weydiin sadex su.aalood.
Caymis muxuu yahay ?
Dalnoocee ah ayuu ka shaqeeyaaa?
wakhtiga noocee ah buu shaqeeyaa?
su,aalaha intaanan fikirkeyga ka dhiiban waxaan aad uga naxay dad shahaadooyin jaamacadeed sita oo warqado sharci la ordaya oon garaneyn waxan ay ka shaqeynayaan .
hadaba caymisku fikirkeyga gaaban waxaan u aqaan qaadhaan gaadiidleyda ka dhaxeeya oo hab sharci loo maray , isagoo dawlada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay wada leeyihiin ama midkiiba leeyahay 50% , caymiskaasu waa ka aduunyada ka jira , akhriste hadad ogtahay iyo hadii kalaba .
Markaa kaynu maanta dalkii ku arkeyno horta shirkadaa gaar uleh cid xakameynaysa iyo dawlad gadhwadeen u ah midna ma jiro waa faa.iido doon uun.
su,aasheeyda labaad markaan ugudbo , caymisku dalka uu ka shaqeeyaa maaha dal kaabayashiisa dhaqaale burbursan yihiin ee waa dal ay dhisan yihiin oo gaadiidka iyo dadka dhaqaalaha soo galaya lawada ogyahay oo shaqo fiican ay ku hayaan gaadiidleydu gawaadhida ay wataan , hadaad ukuur gasho gawaadhida xamuulka qaada bishii hal marbey wax qaadaan , bal gaadhi iyo darawal ,kirishboy ,dhamaan is dulfadhiya oo bishii hal mar wax helaya ayaad sii kalifeysaa ood leedaha bukharow wax iiga dhiib .
illahay ka cabso oo cadaalad daro aad garanayso ha ku dhicin
waxaan kaga baxayaa maqaalkeygan fariintaa aan gudoomiyaha iyo gudida caymiska udirayo oo ah arintaa dib haloogu noqdo oo hala eego xaalada umada ku jirto yaanay idinka noqon baadho waa la baadhee,,,,,